Baarlamaanka Yurub | Vaikuttajan reittikartta
Qeybta ugu muhiimsan ee go’aan ka gaaridda Midowga Yurub (EU) waa Baarlamaanka Yurub, Golaha Yurub (Euroopan unionin neuvosto) iyo Guddiga Yurub (European Commission). Xubnaha Baarlamaanka Yurub waxaa laga doortaa ayaga oo soo maro doorashada oo waxay si toos ah u matalaan mawaadiniinta EU ga. Waqtigan waxaa jira 766 Xubnood ee Baarlamaanka Yurub kuwaas oo 13 ay Finns yihiin.
Inkastoo EU ga laga yaabo in uu umuuqdo meel fog, si weyn ayay raad ugu yeeshaan sharci dejinta iyo arrimo badan ee Finland dhexdeeda. Baarlamaanka Yurub wuxuu ka qeyb qaataa abuurista sharciyo la xiriira, iyo waxyaabo kale, sida bay’ad, badqabka deegaanka, xuquuqda macmiilada iyo sidoo kale issugudubka taraafigada, dadka, lacagta, adeegyada iyo alaabaha xuduudaaha isu dhaafa. Baarlamaanka Yurub, wada-jir Guddiga Yurub, ayaa sidoo kale go’aamiya sida lacagta EU ga loo qarash gareyn la’ahaa.
Xubnaha Baarlamaanka Yurub shantii sanadoodba mar ayaa la doortaa oo la qabta Doorashooyinka Baarlamaanka Yurub. Sidoo kale raad ayaad ku yeelan kartaa Baarlamaanka inta u dhaxeyso doorashooyinka. Waxaad xuquuq u leedahay in Baarlamaanka aad su’aalo weydiiso, jawaab-celis u gudbiso oo aad aqrido dhammaan dokumentiyada shacabka. Sidoo kale waxaad gudbin kartaa racfaan rasmi ah oo u gudbineyso Baarlamaanka. Macluumaad dheeraad ah oo fursadahan u saabsan waxaad ka heleysaa bogyada internetka ee Baarlamaanka Yurub oo ah. Sidoo kale waxaad la xiriiri kartaa Xubanaha Finnish ee Baarlamaanka Yurub ama kalkaaliyaalkooda. Maclmaadka aad kala xariireyso halkan ayaad ka heli kartaa.
Macluumaadka Baarlamaanka Yurub ee Xafiiskooda Finland